Imveliso yokutya kwezilwanyana zasekhaya - China Abavelisi bokutya kwezilwanyana kunye nababoneleli
Ukutshiza kwamanzi kwakhona
Amacala okutshiza iReport
Ukuqondisa kwakhona umphunga ngqo
Umphunga kunye nokuPhendula kwakhona ngoMoya
Ukutshiza amanzi kunye nokujikeleza kweRotary
Ukuntywiliselwa kwaManzi kunye nokuQina kokujikeleza
Umphunga kunye neRotary Retort
Inkqubo yeRortal Retort System
Inkqubo yokuZenzekelayo yokubamba
Qhubeka Sterilizer Hydrostatic
Buyela kwakhona kwiBhasikithi
Buyisa iTreyini yesiseko
Ukuguqula itreyi kwakhona
Ulwaleko oluphindwe kabini
Uluhlu lweHybridi Pad
Ukubuyisa kwakhona amandla
EYODWA KUNYANGO • Gxila kwisiphelo esiphakamileyo
Amacala okutshiza abuyele
Ukutshiza kwenzalo ngamanzi
Fudumeza kwaye upholise ngumtshisi wobushushu, ke umphunga kunye namanzi okupholisa awayi kuyingcolisa imveliso, kwaye akukho khemikhali zonyango lwamanzi ezifunekayo. Inkqubo yamanzi itshizwa kwimveliso ngempompo yamanzi kunye nemilomo esasazwa ekubuyiseleni ukufezekisa injongo yoxinzelelo. Ukushisa okuchanekileyo kunye nokulawulwa kwengcinezelo kunokufanelekela kwiintlobo zeemveliso ezipakishwe.
Fudumeza kwaye upholise ngumtshisi wobushushu, ke umphunga kunye namanzi okupholisa awayi kuyingcolisa imveliso, kwaye akukho khemikhali zonyango lwamanzi ezifunekayo. Inkqubo yamanzi ikhutshiwe ngokulinganayo ukusuka phezulu kuye ezantsi ngempompo yokuhamba kwamanzi amakhulu kunye nesitya sokusahlula amanzi ngaphezulu kwendlela yokufezekisa ukufezekisa injongo yokubulala inzala. Ubushushu obuchanekileyo kunye nolawulo loxinzelelo lunokulungela iintlobo zeemveliso ezihlanganisiweyo. Iimpawu ezilula nezithembekileyo zenza ukuba i-DTS inzalo iphinde isetyenziswe ngokubanzi kushishino lwesiselo saseTshayina.
Fudumeza kwaye upholise ngumtshisi wobushushu, ke umphunga kunye namanzi okupholisa awayi kuyingcolisa imveliso, kwaye akukho khemikhali zonyango lwamanzi ezifunekayo. Inkqubo yamanzi itshizwa kwimveliso ngempompo yamanzi kunye nemilomo esasazwa kwiimbombo ezine zetreyi nganye yokufezekisa ukufezekisa injongo yokuvalwa kwenzalo. Iqinisekisa ukufana kobushushu ngexesha lokufudumeza nokupholisa, kwaye kufanelekile ngakumbi kwiimveliso ezipakishwe kwiingxowa ezithambileyo, ngakumbi ezifanelekileyo kwiimveliso ezinobushushu.
Ngokudibanisa ifeni ngesiseko sokucoca umphunga, indawo yokufudumeza kunye nokutya okuhlanganisiweyo kunxibelelana ngokuthe ngqo kwaye kunyanzeliswa ukuhanjiswa, kwaye ubukho bomoya kwinto yokubulala iintsholongwane buvumelekile. Uxinzelelo lunokulawulwa ngokuzimeleyo kubushushu. Isinyanzelo sinokusetha amanqanaba amaninzi ngokweemveliso ezahlukeneyo zeephakeji ezahlukeneyo.
Umkhwa wokulungiswa kokutya kukusuka kwiinqanawa ezincinci zokubuyisa ukuya kwiigobolondo ezinkulu ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko lwemveliso. Iinqanawa ezinkulu zithetha iibhasikiti ezinkulu ezingenakuphathwa ngesandla. Iibhasikithi ezinkulu zinobunzima kakhulu kwaye zinzima kakhulu ukuba umntu omnye angahamba ngazo.
Idilesi: dts indawo yemizi-mveliso, zhucheng, Shandong kwiphondo, pr china
Ifowuni: +86 536-6549353